သိပ္ပံတရားမျှတသောဓာတုဗေဒ Project မှအကြံပြုချက်များနှင့် Inspiration
ဤရွေ့ကားသိပ္ပံပညာတရားမျှတတဲ့စီမံကိန်းများကိုစိတ်ကူးများသင်တစ်ဦးသိပ္ပံတရားမျှတတဲ့စီမံကိန်းကိုသို့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်အချက်အလက်များနှင့်မေးခွန်းများကိုသည်။ bookmark ဒီစာမျက်နှာသို့မဟုတ်အသစ်အတွေးအခေါ်များကဆက်ပြောသည်နေကြသည်ကတည်းကမှန်မှန်ပြန်စစ်ဆေးပါ။ သင်တစ်ဦးအနေနဲ့အယူအဆတင်ပြစေခြင်းငှါ သိပ္ပံတရားမျှတတဲ့စီမံကိန်းအတွက် စာရင်းထဲတွင်ထည့်သွင်းရန်။
11 တန်းနိုင်အောင်တစ်ဆုရသို့မဟုတ်စဉျးစားစရာစီမံကိန်းကိုကျောင်းအင်တာဗျူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းပညာသင်ဆုများသို့မဟုတ်အကူအညီရရှိနိုငျသညျ, ကျောင်းသားများကိုကောလိပ်များမှလျှောက်ထားရန်များအတွက်အမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
10th တန်းသိပ္ပံတရားမျှတတဲ့စီမံကိန်းများကိုကျောင်းသားများကိုသူတို့ကောလိပ်ပညာရေးသို့မဟုတ်သိပ္ပံပညာအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုလိုက်ချင်သည်ဖြစ်စေလေ့လာစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းကိုဆက်ကပ်။ ဒီအဆင့်မှာပညာသင်ဆုအခွင့်အလမ်းလည်းရှိပါတယ်။
7th Grade သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းအကြံပြုချက်များ
Environmental Science သို့တရားမျှတသောစီမံကိန်းအကြံပြုချက်များ
High School တွင်သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းအကြံပြုချက်များ
သံလိုက် & သံလိုက်သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းအကြံပြုချက်များ
ပလတ်စတစ် & polymer သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းအကြံပြုချက်များ
ဆား & သကြားသိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းအကြံပြုချက်များ
အဆိုပါအမှောင်ရေခဲပြင်ထဲမှာ Glow Make လုပ်နည်း
အဆိုပါ Next ကိုအဆင့်သင်၏မီးတောင်သိပ္ပံ Project မှယူပါ
မိုးရန်မီးသတ် Set လုပ်နည်း
Vesuvius မီးသတ် - ထိုဂန္ထဝင်ဓာတုမီးတောင် Make လုပ်နည်း
တစ်ဦးအပူပိုင်းရေခဲပြင်လေဘောလုံး Make ရန်ကဘယ်လို
ဘယ်လို (Safely) တစ်ဦး CD ကို Microwave မှ
Candy ထဲက DNA ကိုမော်ဒယ် Make လုပ်နည်း
အဘယ်မှာရှိဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်သို့မဟုတ် Lye ကိုဝယ်ရန်
ယင်းသုည (သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းသော) Infinite ကဘာလဲ?
"အို du, Abendstern မိန်းကိုင်ဆောင်သူ" Lyrics နှင့်စာသားဘာသာပြန်စာပေ
Delphi အတွက် TStream အတန်းအစား
ဖာနန်ဒို Ortega နေဖြင့်ထိပ်တန်းသီချင်းများ
ဂယ်ရီ Cooper က၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဆိုပါ Puget အသံနှင့်အနီး Live ဒါက 20 ငါးမျိုးစိတ်သစ်
အိုးခဏ! ဒါက Paddleboard တစ်ဦးကယပ်လှေဖြစ်ပါသည်
ထိပ်တန်း 10 Christina Aguilera သီချင်းများ
Xolotl, Aztec ဘာသာတရားအတွက်အမွှာပူးနှင့်အဖြားနာ၏ခွေးတစ်ကောင်ကိုဘုရားသခငျသညျ
Cheyenne အဘိဓါန်ဝုဒ်: သူမရဲ့ထိပ်တန်းပြိုင်ပွဲများနှင့်အောင်မြင်မှုများ
Juz '' 15 ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏
ဂျပန် | အချက်အလက်နဲ့သမိုင်း
သော pH calculate ကိုရန်ကဘယ်လို - လျင်မြန်စွာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
တိရိစ္ဆာန် Totem ပြခန်း: အာတိတ် / Tundra Totem